Pep Guardiola oo qalinka ku duugay heshiis cusub oo labo sano ah kooxda Manchester City
Home Horyaalka Ingiriiska Pep Guardiola oo qalinka ku duugay heshiis cusub oo labo sano ah...
Pep Guardiola ayaa ogolaaday qandaraas cusub oo uu kusii joogayo shaqada kooxda Manchester City laba xilli ciyaareed oo dheeri ah, kooxda ka ciyaarta Premier League ayaa ku dhawaaqday.
Guardiola ayaa ku jiray bilihi ugu dambeeyay heshiiskiisa, laakiin 49 jirkaan ayaa haatan mustaqbalkiisa u hibeeyay City ilaa 2023.
Haatan bartamihii ololihiisii ​​shanaad ee Manchester, qandaraaska cusub ayaa loo kordhiyay waxa horey u ahaa mudadii ugu dheerayd ee uu Guardiola la joogo koox kasta.
Intii lagu gudajiray Guardiola wuxuu ku guuleystay labo horyaal oo Premier League ah, seddex League Cups iyo FA Cup, inkasta oo abaalmarinta ugu badan ee City ay dooneyso, Champions League, aysan ilaa iyo haatan ka dhicin.
Guardiola ayaa yiri: “Tan iyo markii aan imid Manchester City waxaa la igu soo dhaweeyay kooxda- ciyaartooyda, shaqaalaha, taageerayaasha, dadka reer Manchester iyo gudoomiyaha iyo milkiilaha.
Intaa wixii ka dambeeyay waxaan wada gaarnay heshiis weyn, waxaan dhalinay goolal, waxaan guuleysanay ciyaaro iyo koobab, dhamaanteenna aad ayaan ugu hanweynahay guushaas.
Inaan haysto taageerada noocaas ah waa waxa ugu wanaagsan ee tababare kasta uu heli karo. Waxaan hayaa wax walba oo aan jeclaan lahaa inaan ku qabsado shaqadayda si wanaagsan, waxaana hoos u dhigay kalsoonida milkiilaha, gudoomiyaha, Ferran (Soriano) iyo Txiki (Begiristain) ay muujiyeen. anigana inaan sii wado labo sano oo dheeri ah xilli ciyaareedkaan kadib.
Previous articleXulka Italy oo wacdaro ka dhigay tartanka Nations League
Next articleReal Madrid oo bartilmaameed sare ka dhigeysa David Alaba si ay ugu buuxiso booska Sergio Ramos.